FAQs - Weifang Hualand Makiinado Co., Ltd
Waa maxay sababta aan shirkadda Huamachinery iibsadaan?
Maxaa yeelay, waxaynu nahay badan oo kaliya warshad. Hadafkayagu waa in la hubiyo in macaamiisha kasta waa 100% ku qanacsan ay gadashada iyo waayo-aragnimo shopping. Haddii aadan ku qanacsanayn gabi ahaanba, waxaan u jawaabi doonaa walaac aad isla markiiba.
Maxaa dhacaya haddii ay wax dhibaato ah oo aan item?
Waxaan leenahay hal sano oo damaanad ah, qaybo ka badalka Free ay sabab u tahay dhibaatada tayo Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in ay aqbalaan celinta sheyda xaalad cusub. Our damaanad khuseysaa oo keliya iibsaday asalka ah ee mishiinka.
Sidee si aad u dalbato?
Ka dib markii aad go'aansato in aad iibsato, waxaan kuu soo diri doonaa qaansheeg proforma macluumaadka bangigaaga noo, keeni PI this bangiga, oo weydii in ay sameeyaan T / T for deebaajiga. Waayo, set hal, aad mashiinka loo dhiibi karaa 5 maalmood gudahood ka dib markii aan qaadan deebaajiga, waxaan u diri doonaa inay dekedda iyo samatabbixin in aad badda.
kiiska -In for eedeeyay maaraysay dheeraad ah, aad ku wareejiso karaa 100% bixinta, waxaanu kuu qabanqaabin karaa wax soo saarka iyo maraakiibta ka yar aad kaalmada
-Haddii aad weli ma fahmin, fadlan ha hestitate in ay i weydiin
Waxaan ka dalban kartaa 1 set tusaale?
Yes.Sample la aqbali karo, Waxaad tijaabin kartaa tayada muunad.